यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ससंद विघटन गरेपछि देश अहिले एउटा संकटकाे अवस्थामा पुगेकाे छ । ओलीकाे याे कदम विरुद्व अहिले ठाउँठाउँमा विभिन्न खाले आन्दोलनहरु भैरहेका छन् ।
शुक्रबार काठमाण्डाैंकाे माइतीघरमा प्रचण्ड र माधव नेपाल लगाएतका नेताहरु ‘हामी यहाँ छौ’ भनेर सडकमा बसेकाे तस्बिर अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल बनेकाे छ । भाइरल पनि किन नहाेस्, हिजो जनताले सरकार कता छ भनेर खोज्दा चुपचाप कानमा तेल हाले जसरी बसेका कमरेडहरु आज एक्कासि यसरी सडकमा देखापर्दा ।
ओहाे ! सत्ताको लागि सडकमा ? मलाई त याे साेच्दा र सुन्दा त अचम्म लाग्छ । देख्दा पनि दिक्क लागेर आउँछ।
हिजो देशमा त्यति धेरै भ्रष्टाचार हुँदा, देशको सिमामिचिदा, ह’त्या हिं’सा हुँदा, बला’त्कार हुँदा बिरोधको लागि हामी यहाँ छौं भनेर सडकमा आएको भए जनताले तिम्रो विश्वास गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो होला, आज तिमी सडकमा आउँदा समेत जनताको पुर्ण समर्थन हुन्थ्यो होला, तिमी सडकमा आउनु उचित हुन्थ्यो होला ।
तर आज तिमि सडकमा आउनुपर्ने कारण के ? भोलि सत्तामै पुग्नको लागि होइन र ? गन्तव्य सडक होइन गन्तव्य त सत्ता हो तिम्रो कमरेड ! नत्र किसानहरुले बर्सो बर्ष देखि आफ्नो मेहनत परिश्रम र पसिना बगाएर उत्पादन गरेको बस्तु सेवाहरुको भुक्तानीकाे मुल्य खै ? बिचारा किसानहरुको सडकमा बाँस छ, नत खाने गाँस छ, नत ओढ्ने कपास छ ।
कंचनपुरकी निर्मला पन्तको ह’त्यारा अहिलेसम्म कहाँ छ थाहा छैन् । बला’त्कार पीडितलाई न न्याय छ, नत न्याय दिलाउने कुनै त्यस्तो निष्पक्ष न्यायाधीश नै छ । तिमी अधिनायकवादिहरुलाई भने सत्ताको मोहमा माेलमाेलाइ छ ।
अहिले तपाइहरु यहाँ सडकमा हुनुहुन्छ ३३ किलो सुन काण्ड हुँदा, वाईडबडी भ्रष्टाचार हुँदा, बालुवाटार जग्गा प्रकरण हुँदा, सेक्युरिटी प्रीन्टिङप्रेस खरिद काण्ड हुँदा, मेलम्ची ठेक्का काण्ड हुँदा त्यतिबेला कहाँ हुनुहुन्थ्याे कमरेड ?
देशमा भैरहेका विकृती विसंगती तिर हाम्रा यी कमरेहरु कसैको ध्यान छैन् । सडकमा आउँदा पनि तिम्रो कालो कोट छ, कत्तै कोटमा धुलो लाग्ला भनेर चकटिको व्यवस्था छ ।
यी कमरेडहरुकाे नाटक अब हामी जनता सबैलाई थाहा भैसक्याे र यो प्रक्रिया हाम्रो नेपालमा उहिल्यै देखि नै चल्दै आई राखेको छ । पालो सबैको आउँदो रहेछ, जे गरेपनी सबै सत्ता र कुर्सीकै लागि रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भैसकेको छ । हिजो जनताले हामीलाई अन्याय भयो, अनियमितता भयो, देशमा भ्रष्टाचार भयो भन्दा कमरेड तपाइहरु चुपचाप हुनुहुन्थ्याे नि ।
तपाइहरुलाइ लुट्न नपाएर अहिले यस्तो छ कमरेड । बिचारा जनताहरुलाई तिम्रो भाषण अनि चर्तीकला देख्न मै ठिक्क छ, गाउँ गाउँमा सिहंदरबार बनाउछौ भन्ने तिम्रो अभियान कता छ ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तह त बनायौं तर तिम्रा झोलेहरुलाई लुट्न अनि भ्रष्टाचार गर्नमै ठिक्क छ ।
केही गरौंला भनेर विश्वास गरेर जनताले दिएको बहुमतको यहाँ अपमान छ । अनि हामी यहाँ छौ भनेर देखाउन लायकको तिम्रो अनुहार कहाँ छ र ।
कमरेड अब हजुरहरु सडक होइन जगंल जानू उचित छ । कम्तिमा तपाइहरुले मान्छेको जस्तो काम गर्नुपर्थ्याे नि ! दरबारमा बस्नलाई त सिहंहरुको लागि जंगल नै उचित छ । जगलको गुफा भित्र बसेपछि थाहा हुन्छ कि दरबारको महत्त्व कति छ।
लेख्न, बोल्न र अनुहार देखाउन पनि लाज मानुपर्ने हाे । अझ ‘हामी यहाँ छौ’ भन्ने कुरा त अल्लि परको कुरा छ । देश बनाउने देशभक्तहरुको व्यवहार र चरित्र यही हो ।
जनताले राजा फालेर आफुसम्मानकाे वर्ग खाेजेका हुन् । देश विकास खाेजेका हुन् । तर तपाइहरु त राजा भन्दा पनि महाराज निस्कनुभयाे । अब महाराजाबाट के अपिक्षा गर्नु ? अबको चुनावमा जनताले तिम्रो विश्वास कसरी गर्लान र कसरी चुनाव जिताैंला । अब कहिले हुन्छ स्थिर राजनीति अनि स्थिर सरकार र देश विकास ।